Umtsalane, iPatio yabucala, imizuzu ukuya eDetroit River
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPeter
UPeter ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Yonwabele eli khaya linomtsalane entliziyweni yeWyandotte! Imizuzu nje kude ukusuka edolophini iWyandotte kunye noMlambo iDetroit, umgama omfutshane wokuya eDetroit, uneebhari zolonwabo kunye neeresityu ezikufutshane.
Ikhaya lethu lilala 4. Inebhedi enkulu kunye nesofa yokulala. Ukongeza, sinekhitshi elimemayo neligcwele ngokupheleleyo elifumanekayo ukuba lisetyenziswe, idesika yakhe nabani na ohamba ngomsebenzi okanye osebenzayo okanye ofunda ekude, ipatio yabucala, kunye negumbi lokuhlala eline-Smart TV yokusasaza imiboniso bhanyabhanya oyithandayo!
Imnandi kakhulu ngetoni yomlinganiswa! Yonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye i-cocktail yangokuhlwa kwiveranda egqunyiweyo ngokujonga indawo ebukekayo yaseWyandotte. Lalisa intloko yakho kwibhedi yethu epholileyo kunye nesofa yesofa yeendwendwe ezongezelelweyo. Pheka isidlo ngekhitshi egcwele ngokupheleleyo kwaye usasaze iinkqubo zakho zikamabonwakude ozithandayo kunye neemuvi kwiRoku Smart TV.
IWyandotte yindawo entle kakhulu esemazantsi eDetroit. Eli khaya lifanelekile kubahambi abajonge ukonwabela umlambo iDetroit. Ngaphantsi kweemayile ukusuka kwi-marinas kunye neepaki zasemanzini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wyandotte